Doorashada USA: Ted Cruz oo hakiyey Tareenkii dheereeyey ee Donald Trump | shumis.net
Home » News » Doorashada USA: Ted Cruz oo hakiyey Tareenkii dheereeyey ee Donald Trump
Doorashada USA: Ted Cruz oo hakiyey Tareenkii dheereeyey ee Donald Trump
Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga ee tartanka Madaxweynaha dalka Maraykanka Senator Ted Cruz ayaa guul weyn ka gaarey doorashooyinka is-reeb-reebka Musharixiinta oo habeenkii xalay (Super Saturday) shan gobol ka dhacay dalka Maraykanka. Ted Cruz ayaa muujiyey in uu yahay musharaxa keliya ee joojin kara Donalad Trump oo ay ka soo horjeedaan Siyaasiyiinta waaweyn ee xisbigiisu.
Cruz ayaa ku guuleystey gobolada Kansas iyo Maine oo markii hore loo saadaalinaayey in Donald Trump ku guuleysan doono. Donald Trump ayaa ku guuleystey gobolada Kentucky iyo Louisiana.
Doorashooyinkan oo la urursanayo ergooyin lala tago shirweynaha Xisbiga bisha Luuliyo ayaa Ted Cruz si weyn ugu soo dhawaadey dhanka ergooyinka. Trump oo si weyn u guuleystey Super Tuesday la soo dhaafey ayaa hadda haysta 378 ergey, halka Ted Cruz haysto 295 ergey. Guud ahaan ergooyinka laga doonayo Musharaxa Jamhuuriga ayaa ah 1237 ergay.
Musharaxa Jamhuuriga ah ee sida weyn u khasaarey ayaa ah Marco Rubio oo ah Senator laga soo doorto gobolka Florida, Musharaxan ayaa lagu wadaa in uu ka haro tartanka marka la gaaro 15 Maarso, markaas oo gobolkisa ay ka dhacayso Doorashadu si aanu ugu oggolaan in Donald Trump guul weyn ka gaaro. Donalad Trump ayaa khudbadiisi xalay ka dalbadey Rubio in uu isaga haro tartanka si ay u noqoto isaga iyo Ted Cruz oo keliya.
Musharaxa Dimoqraadiga Senator Bernie Sanders
Dhanka kale isla habeenkii xalay waxaa Musharixiinta Xisbiga Dimoqraadigu ku tartameen saddex gobol oo kala ah Kansas, Nebraska iyo Louisiana.
Bernie Sanders oo ah ninka la tartamaya Hillary Clinton ayaa ku guuleystey labada gobol ee Kansas iyo Nebraska. Clinton ayaa ku guuleysatey gobolka Louisiana oo ahaa gobol ka ergooyin badnaa kuwa kale. Guusha labada gobol ee Bernie Sanders ayaa fir-fircooni u gelineysa in uu sii wadi karo ol-olihiisa, inkasta oo habeenkii xalay laga ergooyin badnaa Hillary ayaa heshay 65 ergey, halka Bernie ku guuleystey in uu urursado 47 ergey oo keliya.
Xisbiga Dimoqraadiga oo isagu iska leh Ergooyin loogu yeero Super Delagate oo aan tartan ku imaan ayaa intooda badan taageersan yihiin Hillary Clinton, waxaana ay hadda haysataa 1121, halka Bernie Sanders haysato 479 ergey oo keliya waxaana laga rabaa qofka guuleystey 2383 ergey.
Title: Doorashada USA: Ted Cruz oo hakiyey Tareenkii dheereeyey ee Donald Trump